के हो पेगासस ? कसरी गरिन्छ फोन ह्याक ? | Ratopati
अमेरिकाको वासिङ्टन पोष्ट, भारतको समाचार वेबसाइट ‘द वायर’ लगायत सञ्चारमाध्यमले एउटा खबर प्रकाशित गर्दै दाबी गरेको छ – विश्वभरका कयौँ पत्रकार, नेता, कुटनीतिज्ञ र सामाजिक कार्यकर्ताको फोन ह्याक गरिएको छ । यद्यपि, ‘पेगासस’ नाम गरेको जुन ‘स्पाइवेयर’ को प्रयोग गरेर फोन ह्याक गरेको समाचार बाहिर आएको छ, त्यसलाई तयार गर्ने कम्पनी एनएसओले भने सबै आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ । यस प्रोग्रामलाई केवल ‘जाँच र परीक्षण गरिएपछि’ सरकारहरूलाई मात्र बिक्री गरिने कम्पनीको दाबी छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार भारतका पत्रकार र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको फोनलाई इजरायलमा निर्मित यस सफ्टवेयरको माध्यमबाट ह्याक गरियो र उनीहरूको निगरानी गरियो । अब प्रश्न उठ्छ आखिर यो ‘पेगासस’ के हो र यसले कसरी काम गर्छ ?
पेगासस प्रकरण : नेपालका राजदूतको फोन ह्याक गरी भारतले जासुसी गरेको आरोप
डा. गाबी सि बोनी भन्छन्, ‘यो निकै जटिल प्रविधि हो । यसलाई प्रशिक्षणपछि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । सायद एनएसओले यसलाई खरिद गर्ने सरकारको एजेन्टलाई प्रशिक्षण दिन्छ ।’
के केही सङ्केत देखिन्छ जसबाट फोन ह्याक भएको पत्ता लगाउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा गाबी भन्छन्, ‘यदि लक्षित व्यक्तिले ह्याक भएको थाहा पाउने हो भने त ह्याक गरेको मतलब नै भएन नि ।’